Ndifuna ukwazi ukuba ndenza njani izikhonkwane ngeefoto zam Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndifuna ukwazi ukuba ndenza njani izikhonkwane ngeefoto zam
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 306
I-Pinterest yenye yezona ndawo zidumileyo zonxibelelwano lwangoku, kule nethiwekhi yentlalo enomxholo obonakalayo, abantu abaninzi babelana ngenxalenye enkulu yezinto abazithandayo kunye nezinto abanomdla kuzo, yenziwe ngo-2008, iyaphuma kwintengiso njengeqonga elibonakalayo. Apho abantu banokwabelana ngezinto ezininzi kwizihloko ezininzi ngendlela ecwangcisiweyo.
Omnye umahluko omkhulu waleqonga ngokubhekisele kwezinye iinethiwekhi zentlalo kukuba abasebenzisi banethuba lokuzilungiselela Ngokokhetho lwakho kunye nezinto ozikhethayo, upapasho lwakho, Oko kukuthi, benza imiboniso yezihloko ezahlukeneyo zokupapashwa kwakho, kwezi bhodi isihloko ngasinye sibonwa ngokwahlukeneyo.
Kule minyaka idlulileyo, njengonxibelelwano oluninzi lwentlalo, iPinterest iguqukile kwaye sele inezinye izibonelelo ebengazibonisanga ngaphambili, njengeakhawunti zeshishini, ukuthumela imiyalezo ethe ngqo kunye nokwabelana nokwabelana nabanye malunga nabahlobo bethu zezinye zezi zinto. Namhlanje siza kuchaza indlela onokwabelana ngayo neefoto zakho kwisicelo.
Yabelana ngeefoto zakho:
Kule meko, into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba ukuba awunayo iakhawunti yePinterest akukho Uya kuba nakho ukwabelana ngesiqulatho singesiso esakho okanye esomntu wesithathu, ukwenza iakhawunti oya kuyifumana kwidilesi yeziko elisemthethweni losetyenziso kwaye ungene kulo.
Khetha ukhetho ukwenza iakhawunti entsha, Faka igama lakho lomsebenzisi, idilesi ye-imeyile iyacetyiswa malunga noku kwaye emva koko wenze ikhowudi yokufikelela, nje ukuba ufake isicelo, qwalasela iprofayile yomsebenzisi ngokwemiyalelo oya kukunika yona.
Ukuba kwimeko yakho sele unayo iakhawunti yePinterest, emva koko ungene, xa ukwiqonga, cinezela i icon echongwe ngophawu, onokuyifumana ikwikona esezantsi ekunene kwesicelo sasekhaya.
Khangela kwaye ukhethe enye indalo yokudala.
Khetha umfanekiso, uwutyhalele kumgca oza kuboniswa liqonga ngeli nyathelo, okanye, ukusilela oko, khetha i-ayikhoni ephawulwe ngetolo ephezulu. Yeyiphi eyona ikuxelela ukuba ungalayisha umfanekiso ukusuka apho.
Okwangoku inkqubo iya kukucela ukuba ungeze igama emfanekisweni, uphononongo olufutshane ukuyichaza okokugqibela, ukuba unayo, ikhonkco lendawo ekuyiwa kuyo.
Cinezela ukhetho lokukhetha, phezulu kwesihloko.
Ngeli xesha inkqubo iyakukucela ukuba ubonise ibhodi ofuna ukuba ipapashwe kuyo umfanekiso, ukhethe kwaye ucinezele ukuqhubeka kokukhetha, ukuba ufuna ukwenza ibhodi entsha ungayenza ngeli xesha.
Gqibela Cinezela icandelo lokugcina kwaye ngale ndlela uya kuba wabelana ngefoto yakho.
Khumbula ukuba iimpapasho ezintsha kwesi sicelo ingathatha imizuzu eli-10 ukuya kweli-15 Ukuvela kwiakhawunti yakho, yiba nomonde omncinci.
2 Yabelana ngeefoto zakho:
Ndingayithenga njani imveliso kwiPinterest?
Uyenza njani imowudi emnyama kwiPinterest?